मधेस राजनीतिका सूत्रधार- फिचर - कान्तिपुर समाचार
मधेस राजनीतिका सूत्रधार
फाल्गुन ७, २०७६ तुलानारायण साह
वेदानन्दका बारेमा जान्ने कांग्रेसी, वामपन्थी र मधेसवादी राजनीतिका सक्रिय/निष्क्रिय नेता, राजनीति शास्त्री, बुद्धिजीवी, कूटनीतिज्ञहरूको लामै सूची तयार भयो । करिब एक दर्जनसँग कुराकानी गरियो ।
मधेसका धेरैले वेदानन्द झालाई गद्दार नेताका रुपमा लिन्छन् । कूटनीतिज्ञहरू अत्यन्त प्रभावशाली राजदूतका रूपमा सम्झिन चाहन्छन् । केही राजनीतिशास्त्रीका तर्कमा उनी नेपालमा संघीयताका जनक पनि हुन् ।
बितेका डेढ दशकमा नेपाली राजनीतिमा संघीयताको बहस सघन भएसँगै राजनीतिशास्त्रीका वृत्तमा वेदानन्द झा र तराई कांग्रेस पनि चर्चाका विषय भइआएका छन् । तर, मधेसका कतिपय नेता र बुद्धिजीवी झालाई जस दिन तयार भेटिँदैनन् । ‘तराई कांग्रेसका संस्थापक वेदानन्द नभई उनका दाजु कुलानन्द झा र अर्का नेता बलदेव दास थिए । त्यसकारण चर्चा कुलानन्द र बलदेवहरूको हुनुपर्छ,’ केही मधेसी राजनीतिकर्मीको तर्क हुन्छ ।
वेदानन्द झा र तराई कांग्रेसबारे लिखित दस्तावेज निकै कम उपलब्ध छन् । पुराना दस्तावेज संकलन गर्दा फ्रेडरिक एच. गेजको ‘नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता,’ ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको ‘नेपालको राजनीति दर्पण,’ उपेन्द्र यादवको ‘नेपाली जनआन्दोलन और मधेसी मुक्ति का सवाल,’ जयप्रकाश गुप्ताको ‘नेपाल के राजनीतिक आन्दोलन मे मधेसी समुदाय का योगदान’ र रामरिझन यादवको ‘सिरहा के इतिहास’, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति–२०१८ को प्रतिवेदनजस्ता सीमित पुस्तक मात्र उपलब्ध हुन सके ।
उल्लिखित स्रोतहरूका अनुसार नेपाल तराई कांग्रेसबारे सबैभन्दा पहिला सन् १९५३ मे २ मा प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्समा उल्लेख थियो । त्यसपछि मे ४ को स्टेटम्यान पत्रिकामा प्रकाशित थियो । ती दुवै अखबारलाई आधार मानेर ‘डेमोक्रेटिक इन्नोभेसन इन नेपाल’ पुस्तकमा तराई कांग्रेसबारे उल्लेख छ । यो पुस्तक भुवनलाल जोशी र लियो इ. रोजले लेखेका हुन् जुन सन् १९६६ मा प्रकाशित भयो । त्यसपछि सन् १९७५ मा प्रकाशित फ्रेडरिक गेजको पुस्तक र सन् २००३ मा प्रकाशित उपेन्द्र यादवको पुस्तकमा पनि अघिल्ला स्रोतहरूलाई आधार बनाएर तराई कांग्रेस र वेदानन्द झाबारे लेखिएका छन् ।
स्रोत सामग्री अध्ययन र पुराना राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डल, जयप्रकाश गुप्ता, कूटनीतिज्ञ डा. भेषबहादुर थापा, दीपकुमार उपाध्यायलगायतसँग कुराकानी गरेपछि के थाहा भयो भने वेदानन्द झा र तराई कांग्रेसबारे अनेकौं भ्रम छन् जसबारे प्रस्ट हुन बाँकी छ ।
तराई कांग्रेसको वास्तविक नाम नेपाल तराई कांग्रेस (नेतका) थियो । पार्टीका संस्थापक नेताबारे गेज र देवकोटाको पुस्तकमा केही पनि उल्लेख छैन । नेताका रूपमा केवल वेदानन्द झाको नाम उल्लेख छ । स्थापना मिति र संस्थापक अध्यक्षबारे किटानी केही उल्लेख छैन । तर, सन् १९५३ मा प्रकाशित स्टेटम्यान र हिन्दुस्तान टाइम्सका समाचारहरूमा तराई कांग्रेसका नेताका रूपमा वेदानन्द झाको नाम मात्र उल्लेख रहेको गेजको पुस्तकमा छ ।
उपेन्द्र यादव, जेपी गुप्ता, रामरिझन यादवका पुस्तकहरूका आधारमा नेतकाको स्थापना सन् १९५१ (विसं २००८) सालमा कल्याणपुर (हालको सिरहा जिल्ला) मा भएको थियो । स्थापनार्थ आयोजित भेलाको अध्यक्षता बलदेव दासले गरेका भए पनि पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष कुलानन्द झा रहेको उल्लेख छ । पुराना राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलको भनाइ पनि यस्तै छ ।
२०१३/१४ सालतिर भएको हिन्दी बचाउ आन्दोलनको नेतृत्व नेतकाले गरेको थियो । २०१५ को निर्वाचनमा उक्त पार्टीले एउटा पनि सिट जितेन । सो पार्टी २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसमा विलय भएको ती स्रोतहरूमा उल्लेख छन् ।
वेदानन्द झाको व्यक्तित्वका तिनवटा पाटा छन् । पहिलो, तराई कांग्रेसको नेता हुनुपूर्वको समय, दोस्रो, नेता हुँदा र तेस्रो पञ्चायत प्रवेश गरेपछिको ।
विसं १९७४ मा देउरीपट्टी (हाल सिरहा जिल्लामा पर्छ) मा उनको जन्म हुँदा त्यो गाउँ सप्तरी जिल्लामा पर्थ्यो । बुबा नारायणदत्त झा र आमा सीतादेवी थिए । उनले सीमावर्ती भारतीय सहर जयनगरबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । ‘सिरहा के इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार उनी उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं जान चाहन्थे तर सरकारले अनुमति दिएन । वीरगन्जबाट फर्केर उनी कोलकाता पुगे । त्यहाँ पत्रकारिताको प्रशिक्षण लिए । उनले पत्रकारका रूपमा आफ्नो करिअर भारतको पटनाबाट सुरु गरे । आर्याव्रत (हिन्दी) र द इन्डियन नेसन (अंग्रेजी) पत्रिकाहरूको संवाददाताका रूपमा लखनउ र पटनामा काम गरे । पछि तिनै पत्रिकाका उपसम्पादकसम्म भए ।
खुशीलाल मण्डलका अनुसार नेतकाका तत्कालीन नेताहरूले वेदानन्दलाई पटनाबाट बोलाएर पार्टीका अध्यक्ष बनाएका थिए । सिरहा के इतिहास पुस्तकका अनुसार वेदानन्द पढे–लेखेका विद्वान् रहेका कारण कुलानन्द झालगायतका नेतकाका नेताहरूले उनलाई आग्रह गरेरै पार्टीका अध्यक्ष बनाएका थिए ।
पत्रकारबाट नेतकाको अध्यक्ष बन्दाको समयबारे आधिकारिक रूपमा उल्लेख भएका दस्तावेज भेटिँदैनन् । तर, उनको कार्यकालमा नेतकाले गरेका कामहरूबारे विभिन्न पत्रपत्रिका र पुस्तकमा उल्लेख छ ।
सन् १९५३ को मे २ र ४ मा क्रमशः हिन्दुस्तान टाइम्स र स्टेटम्यान पत्रिकाले नेतकाको धारणा एवं मागबारे समाचार प्रकाशित गरेका थिए । उपेन्द्र यादव र फ्रेडरिक गेजका पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेतकाका मुख्य मागहरूमा तराई स्वशासित हुनुपर्ने, भाषा, भूगोल, सामाजिक एवं आर्थिक आधारमा मुलुकमा कम्तीमा चार राज्यको स्थापना हुनुपर्ने, तराईको भाषा हिन्दीलाई राज्यभाषाको रूपमा दर्जा दिनुपर्ने, सरकारी सेवामा मधेसी समुदायलाई सहभागी गराउनुपर्ने, सुरक्षा निकायमा मधेसी रेजिमेन्ट हुनुपर्ने र सल्लाहकारसभामा मधेसीहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने थिए ।
सन् १९५७ को मे २९ मा नेतकाको तेस्रो बैठकबाट तराई क्षेत्रलाई क्षेत्रीय स्वायत्तता दिनुपर्ने माग पारित गरिएको थियो ।
सन् १९५१ नेतकाको स्थापना वर्ष थियो । सन् १९५३ मे मा प्रकाशित समाचारमा वेदानन्दलाई नेतकाका नेता भनिएका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने नेतकाको स्थापनाको केही महिनाभित्रै उनी अध्यक्ष भइसकेका थिए र नेतकाले जे जति राजनीतिक धारणा वा निर्णय लिएको थियो, त्यो वेदानन्द झा अध्यक्ष रहेकै बेलाको थियो । नेतकाका ६ वटा राजनीतिक माग अहिले पनि मधेस राजनीतिमा सान्दर्भिक छन् ।
ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको पुस्तकका अनुसार २००७ देखि २०१५ सालमा मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा केवल तीन मधेसी नाम चर्चामा थिए— भद्रकाली मिश्र, वेदानन्द झा र काशीप्रसाद श्रीवास्तव । यी तीनै जना फरक–फरक पार्टीसँग आबद्ध थिए । मिश्र नेपाल प्रजा परिषद्का नेता थिए । संयुक्त प्रजातान्त्रिक महासभाका महासचिव काशीप्रसाद श्रीवास्तव थिए भने नेतका नेता थिए वेदानन्द ।
२०१३/१४ सालमा सरकारले भाषासम्बन्धमा लिएका केही निर्णय विरुद्ध तराई मधेस क्षेत्रमा हिन्दी बचाउ आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा सबै दलका मधेसीहरू सहभागी भएका भए पनि नेतकाले त्यसको नेतृत्व गरेको थियो र आन्दोलनको केन्द्रविन्दु विराटनगर थियो भन्ने दस्तावेजहरूमा पाइन्छ ।
पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार सल्लाहकार सभामा २००९ वैशाख १ गते थप केही सदस्यको मनोनयन गरिँदा कुलानन्द झा पनि परेका थिए तर उनको जिल्ला उल्लेख छैन । २०११ साल वैशाख १ मा फेरि त्यही सल्लाहकारसभामा वेदानन्द झा (सप्तरी) को पनि मनोनयन भएको थियो । ती दुवैपटकको मनोनयन राजा त्रिभुवनले गरेका थिए ।
२०१५ सालको प्रथम निर्वाचनमा देशभर कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्र थिए । तीमध्ये सप्तरी जिल्लामा ६ वटा थिए । त्यतिबेला सप्तरी र सिरहा एउटै जिल्ला थियो । क्षेत्र नम्बर ४० (जो हालको सिरहा जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र पर्छ) बाट वेदानन्दले उम्मेदवारी दिएका थिए । उनको प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसबाट माधवबाबु रेग्मी उम्मेदवार थिए । त्यसभन्दा पूर्वको क्षेत्र नं. ३८ र ३९ बाट नेपाली कांग्रेसका सूर्यनाथ दास र देवनाथ दास दाजुभाइ उम्मेदवार थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना परिणाम आइसकेपछि मात्रै दोस्रो चरणको हुने व्यवस्था थियो । ३८ र ३९ दुवै क्षेत्रमा नेपाली कांग्र्रेस विजय भइसकेपछि क्षेत्र नं. ४० मा निर्वाचन भएको थियो ।
पुराना राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलका अनुसार नेकाले नेतकालाई सुरुदेखि नै साम्प्रदायिक एवं विखण्डनकारीको आरोप लगाउने गर्थ्यो । नेकाका सर्वोच्च नेता बीपी कोइराला नेतका पार्टी र त्यसका नेताहरूबाट खुसी थिएनन् । नेतका स्थापनाअघि कुलानन्द झा नेकामै थिए । २००७/०८ सालतिर नेकाभित्र उनी मधेसी समस्याबारे बहस गर्न खोज्दा पक्राउ परेका थिए । यो प्रसंग जेपी गुप्ताले पनि आफनो पुस्तक ‘नेपाल के राजनैतिक आन्दोलन मे मधेसी समुदाय का योगदान’ मा उल्लेख गरेका छन् । मण्डलका अनुसार, २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नं. ४० को निर्वाचनलाई आफनो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा वेदानन्द झा र नेतकाको पराजय भएको थियो ।
२०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि वेदानन्द पनि पक्राउ परेका थिए । तर, केही महिनामै जेलबाट रिहा भएर उनी पञ्चायत प्रवेश गरे । नेतकाका तत्कालीन महामन्त्री रामजनम तिवारीको अगुवाइमा सीमावर्ती सहर रक्सौलमा पार्टीको बैठक बस्यो । २०१८ सालमा नेकाका कार्यबाहक सभापति सुवर्णशमशेरको आह्वानमा नेतका नेकामा विलय भएर प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा होमिएको थियो ।
आजका मधेसी नेताहरू वेदानन्दको पञ्चायत प्रवेशको त्यो कदमलाई गद्दारी भन्न रुचाउँछन् भने रामजनम तिवारीको नेकामा विलय र संघर्षको लाइनलाई क्रान्तिकारी भन्दा रहेछन् । जेपी गुप्ताका अनुसार त्यतिबेला नेकामा मिसिएका नेतकाका नेताहरूलाई केही वर्षपछि नै नेकाका संस्थापन पक्षले नजरअन्दाज गर्न थालेका अनुभव भएको थियो । २०३२ सालतिर नेतकाको त्यही समूहसँग गजेन्द्रनारायण सिंह पनि मिलेर कांग्रेसभित्र मधेसी गुट बनाएका थिए, जो कालान्तरमा (२०४२ सालतिर) सद्भावना परिषद्को नाममा बाहिरिएर मधेसी राजनीतिलाई नयाँ बाटो दिएका थिए ।
यता वेदानन्द झा पञ्चायतभित्र अनेकौं मन्त्रालयका मन्त्री हुँदै २०३५ सालमा भारतका लागि नेपाली राजदूत भएका थिए । नेपालमा उनी मन्त्री हुँदा डा. भेषबहादुर थापा सरकारका सचिव थिए । झा राजदूत हुँदा सचिवका रूपमा थापा धेरैपटक डेलिगेसनका सदस्य भएर भारत जानुपरेको थियो । पछि थापा पनि भारतका लागि राजदूत भएका थिए । यो लेख लेख्ने क्रममा भएको भेटमा थापाले भनेका थिए, ‘मेरा विचारमा अहिलेसम्म भारतका लागि नेपाली राजदूतहरूमध्ये वेदाबाबु सबैभन्दा प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो । दिल्लीको कूटनीति, राजनीति, प्रशासनिकका साथै पत्रकारिता जगत्मा पनि उहाँलाई अत्यन्त आदरपूर्वक हेरिन्थ्यो । दिल्लीमा सबैतिर उच्च सम्मानका साथ स्वीकार्यता थियो ।’ लगभग त्यस्तै धारणा पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायको पनि छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ १३:२०
'चीनबाट उद्धार गरिएका १७५ जनामै कोरोनाको संक्रमण देखिएन'
फाल्गुन ७, २०७६ बुनु थारु
काठमाडौँ — चीनको हुबेइ प्रान्तबाट उद्धार गरी आइतबार बिहान नेपाल ल्याइएका १७५ जनामै कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)को संक्रमण नेगेटिभ रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले सो जानकारी दिएका हुन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार चीनबाट उद्धार गरेर ल्याइएपछि गत आइतबारदेखि भक्तपुरको खरिपाटीमा बनाइएको क्वारेन्टाइन क्षेत्रमा बसिरहेका १७५ जनाबाट लिइएको र्‍यालको नमुनाको परीक्षण गर्दा सबैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नेगेटिभ देखिएको हो ।
उनीहरु सबैजनाबाट लिइएको नमुनाको परिक्षण टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको थियो । प्रयोगशालाले हिजो साँझ सबैको रिपोर्ट दिएको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'हाललाई कसैमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएन । अब फेरि १४ दिन पछि सबैबाट पुन: नमुना संकलन गरेर परीक्षण गरिने छ ।'
प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७६ १३:१९